Eoropa: Fifaninanana Horonantsary momba ny fahaizana tenim-pirenena maro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2010 8:29 GMT
Vakio amin'ny teny Português, македонски, Italiano, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Français, polski, English
sary famantarana ny Polyglot
Ireo mpandresy 18 dia ho afaka handray anjara amin'ny POLYGLOT – ho any Turku, tetik'asa “Horonantsary an-tsambo” iantohana daholo ny sarany mandritra ny roa herinandro ho fanofanana amin'ny famokarana sarimihetsika, hatao amin'ny volana Jona 2011 any Turku sy ireo nosin'ny Åland any Finland.
Ity hetsika ity dia karakarain'ny NISI MASA ary ao amin'ny vohikalan'ilay fifaninanana dia azavain'izy ireo ny sokajina horonantsary roa eritreretina ho azo alohan'ny fe-potoana farany amin'ny 15 Desambra 2010:
Horonantsary fanoritsoritana (Fanadihadiana momba ny Fahaizako tenim-pirenena maro) - Mampiasa tenim-pirenena samihafa amin'ny fotoana voafaritra ve ianao? Soritsorito ny tontolon'ny tenim-pirenena iainanao, sy ny fiatraikan'izany aminao manokana.
Horonantsary Tononkalo (Famoronana momba ny Tenim-pirenena hanofisako) - Ampiasao ny fitaovana haino aman-jery ho amin'ny fahaiza-manao faran'izany kanto avy aminy. Zarao aminay ireo hevitra tena miavaka sy kanto avy aminao momba ny tenim-pirenena.
Ireo mpandray anjara dia tsy maintsy monina any amin'ny firenena Eoropeana (EU na tsy EU) ary 18 hatramin'ny 35 taona. Ireo tsanganasa manana halavana tsy mihoatra ny 5 minitra, novokarina nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2008 dia mahazo mifaninana.
Ireo horonantsary mandresy dia haseho mandritra ny fankalazana noho ny tanànan'i Turku mankalaza ny maha-Renivohitra Eoropeana momba ny Kolotsaina azy. Aorian'izay dia hatambatra anaty DVD ireo horonantsary fohy ary haseho manerana an'i Eoropa mandritra ireo fampisehoana tohiny.
Ireo horonantsary rehetra dia hampiakarina ao amin'ny vondrona Vimeo ho an'ilay fifaninanana, telo izy ireo hatreto: Bubble Affair, Endless Cry ary The Whistle, manaraka eto.